Uwe ejiji maka ụmụ agbọghọ n'oge okpomọkụ
Ịkpọ gị òkù ịbịa agbamakwụkwọ dị mma, ma ịme ihe omume a dị oke mkpa gụnyere ịhọrọ uwe kwesịrị ekwesị. Ihe uwe ị na-eyi maka agbamakwụkwọ ahụ n'oge okpomọkụ, na ị mara mma, ma nwee ahụ iru ala, nwanyị ahụ na-alụ ọhụrụ anaghị emejọ. Ee, ee! Uwe maka agbamakwụkwọ maka ndị ọbịa, n'oge okpomọkụ ma ọ bụ n'oge oyi - ọ dịghị mkpa, kwesịrị ịbụ na nwanyị ahụ na-alụ nwanyị ọhụrụ na-enwe mmetụta dị ka eze nwanyị nke ezumike ahụ. Nke a bụ oriri ya, ya mere uwe kachasị mma bụ onyinye nke nwanyị a na-alụ ọhụrụ. Uwe maka agbamakwụkwọ maka ụmụ agbọghọ na okpomọkụ kwesịrị họrọ na uto na echiche nke nkezi. Kwekọrịta, n'agbanyeghị ihe mara mma ma na-adọrọ adọrọ, ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, mgbe ahụ n'oge agbamakwụkwọ nọ na chọọchị ahụ, ọ ga-ele anya na-ekwesịghị ekwesị. Ya mere, olee uwe ị ga-eji na-aga n'oge okpomọkụ gaa agbamakwụkwọ nke enyi gị?
Atụmatụ maka ịhọrọ uwe
Eziokwu ahụ bụ na nwa agbọghọ ahụ nọ n'etiti ndị a kpọrọ akpọ pụtara na ọ bụghị onye ọbịbịa nke nwanyị ahụ a na-alụ ọhụrụ. Site na nke a, ọ na-esote na ohere ịchọta nke agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ nke nwanyị a na-alụ ọhụrụ na-ahọrọ agaghị achịkwa. Na ya ga-eji! Ọ bụrụ na nwanyị ahụ na-alụ ọhụrụ, dị ka ndị ọkachamara na-emekarị, kwụsịrị ịhọrọ uwe e ji acha ọcha na snow, ị gaghị azụta akwa nke otu agba.
Mkparịta ụka ebighi ebi na-eji ejiji obere ejiji. O yiri ka ọ bụ eluigwe na ụwa, dị mma maka ememe ọ bụla, mana ọ kwesịrị ekwesị iyi uwe ojii na agbamakwụkwọ, nke, na mgbakwunye, na-eme atụmatụ n'oge okpomọkụ? Ụdị ụdị na ịcha mma ga-adịrị naanị ma ọ bụrụ na ọ na-arụ na duet na ngwa ngwa na-egbuke egbuke. Ihe eji eme ihe dị omimi (n'ime ezi olu ), a na-ekwe ka ọkpụkpụ dị elu na nke a na-atụ anya.
Nhọrọ kachasị mma, dị ka stylists, bụ uwe elu igwe nke dị n'elu ma ọ bụ obere n'okpuru ikpere. Ọ dị mma, ma ọ bụrụ na ọ bụ ákwà yiri akwa ejiji na ejiji ya. N'ezie, ajị anụ, knitwear, velvet na akwa akwa ndị ọzọ adịghị adabara maka nzube a. Ụdị ndị dị na okpomọkụ na-ele anya na ọ bụghị naanị ịkwa emo, kama o yikwara ka ị ga-enwe nkasi obi. Ekwesiri icheta na agba nke ejiji kwesịrị iche na nke nwanyị a na-alụ ọhụrụ. Ọ dịghị onye nwere ike igbochi ịbị ejiji nke yiri agba, ma ndò ya kwesịrị ịmị ọkụ ma ọ bụ gbarụọ ma ọ dịkarịa ala site na ụda abụọ. Ogologo oge ochie bụ ihe ngwọta kacha mma. Tụkwasị na nke a, atụmatụ agba a bụ nhọrọ mmeri na oge okpomọkụ.
Onyinye agbamakwụkwọ site na kọmpụ
Wedding bouquet nke gerberas
Agbamakwụkwọ Agbamakwụkwọ 2014
Ihe iri na abuo nke agbamakwụkwọ ejiji
Na-alụ ọhụrụ na uwe mgbochi
Uwe ejiji na sirima
Anna Kuznetsova - agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ
Fete n'ihi na ndị ọzọ bachelorette
Agbamakwụkwọ na ejiji
Agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ Papilio - ụdị kacha mma nke nchịkọta ahụ
Ahịa maka nwunye
Nzuzo - ntuziaka maka iji n'ime ime
Salad meat - uzommeputa kpochapu
Njem na Laos
Sarah Jessica Parker mara ọkwa na a ga-enye ya nchịkọta uwe ejiji nke ya
Imeju nke toki dị mma na ihe ọjọọ
Akpụkpọ ụkwụ ọlaọcha
Tritons na akwarium - ọdịnaya
Rubber akpụkpọ ụkwụ Keddo
Ogo nke spam
Mkpụrụ dị mfe na shrimps - nchịkọta ndị mbụ maka nri ngwa ngwa ma dị ụtọ
Helenium - ọdịda na-elekọta na-emeghe n'ala
Onyinye mbụ nke aka gị ji aka
A na-eji ejiji eme ihe
Mmiri akpụkpọ ụkwụ
Hake n'ime mgbidi na oven
Birch buds - ndiife ịgba akwụkwọ
Ịdị elu, ịdị arọ na ọdịdị nke isii nke Dakota Johnson
Otu esi ewepu isi site na ngwa ndakwa nri - ọtụtụ lifhakov dị irè
Imecha ụlọ elu ahụ
Ngwongwo osisi na aka aka